फेरिदै गएको काठमार्डौेंको मुहार - Gopal Bhandari
काठमाडौं सहर हेर्दा लाग्छ रहर । काठमाडौं देशकै लागि गौरव बन्ने भएको छ । २० बर्षे दिर्घकालिन योजना ल्याएर काठमाडौंलाई सुन्दर शहर बनाउन उपत्यका विकास प्राधिकरण जुटेको छ । राजधानीका मुख्य सडकमा सोलार वत्ति जडान, सडक किनारका घरमा एक किसिमको रङ रोगन, ठाउँ ठाउँमा हरियाली र वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रम तत्काल सुन्दर काठमाडौं निर्माण योजनामा समेटिएका छन् । सडक विस्तारमा सरकारले १० अर्ब हाराहारी खर्च गरेको छ । जनसाधारणले आफ्नो भत्केको संरचना नयाँ बनाउँदा ४० अर्ब जति लगानी गरेको छ । ५० अर्ब लगानीमा काठमाडौं नयाँ स्वरुप आउन लागेको छ । काठमाडौंमा थप चाप बढ्न नदिन आसपासमा ‘स्ट्याटलाईट सिटी’ को अवधारणा ल्याईदैछ । काठमाडौंको दुषित र निसासिँदो हावालाई ठाउँ ठाउँमा बनाइने पार्क र सडक किनारका रुख विरुवाले स्वच्छ बनाउने छन् । दुई वर्ष भित्र मेलम्ची परियोजना आए पछि यहाँको खाने पानी संकट पनि टाढिनेछ । देशमा तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य होओस नहोस राजधानीका सडक सोलार बत्तिबाट झलमल्ल हुनेछन् ।
१. भविष्यमा कल्पना गरिएको काठमाडौं
स्रोत : http://www.ekantipur.com/saptahik
फराकिला सडक, ओभरहेड ब्रिज एवं फुटपाथको उचित व्यवस्थाले काठमाडौं देशको राजधानी भनेर गर्व गर्न लायक बन्ने सुरमा छ । सहरमा राति झिलिमिली बत्ती बल्नेछ । प्रेमीहरूका लागि सहर नजिकै प्रेम पार्क बन्नेछ । सवारी साधनले मानिसको चाप थेग्न मेट्रो रेल हाजिर हुनेछ । द्रुत गतिका मोनोरेल चल्नेछन् । रात विरात यात्राका लागि सवारी साधन हाजिर हुनेछन् । अस्पताल, कलेज एवं सिनेमाघरहरू काठमाडौं नजिकैका पहाडका फेदीमा बन्नेछन् । बेस्सरी धूवाँ फाल्ने सवारी साधनलाई रिङ्रोडभित्र छिर्न दिइने छैनन् । उपत्यकाका पुराना नेवार बस्तीमा सवारी साधन लिएर जान पाइनेछैन । ती बस्तीहरूलाई पुरानै अवस्थामा सजाउन करिब एक अर्व रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । सुन्दा कल्पना लाग्ने यो अभियान वर्ष २०६९ देखि प्रारम्भ भैसकेको छ। अभियानको प्रथम चरणको काम प्रारम्भ भैइसकेको छ । पहिले नगर विकासले सुरु गरेको यो कार्य काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पूर्वमेयर केशव स्थापित आएपछि द्रूत गतिमा अघि बढेको हो। यसले काठमाडौंभित्रका ४ सय किलोमिटर सडकलाई झन्डै दोब्बर चौडा बनाउनेछ । ‘योजना अनुसार काम भयो भने अब काठमाडौं सहर आँखामा नबिझाउने बन्नेछ, यो हाम्रो राजधानी हो भनेर गर्व गर्न सकिनेछ । बजेट, म्यानपावर एवं राजधानीवासीको सहयोग हुदाँ ५ वर्ष्भित्र लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
फराकिलो भएका सडकमा पिच गर्ने, बिजुलीका पोल एवं सडक फोहोर देखिने सबै वस्तु हटाइने योजना छ । काठमाडौं भित्रका करिब ४०० किलोमिटर सडक चौडा पारिदैछ । सडक व्यवस्थापनसँगै जनघनत्वअनुसार छहारी सहितका बस बिसौनी, ट्याक्सी स्ट्यान्ड, ट्याक्सी तथा निजी गाडी पार्किङ क्षेत्र पनि निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पार्किङ व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, होर्डिङबोर्ड व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले अर्वौ लगानी गर्नेछ । सरकारको काठमाडौंलाई अझ सुविधा सम्पन्न बनाउन उपत्यकाभित्र ८ लेनको चक्रपथ बनाउने तयारी छ । हालको २ लेनको चक्रपथको क्षमता विस्तारका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो २७.८ किलोमिटर लामो चक्रपथमा लेन थप गर्न साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
सडक विभागका नाममा रहेको खाली जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्न र राजधानीवासीलाई सवारी जामबाट मुक्त गराउन चक्रपथमा नयाँ संरचना थप गर्नुपरेको छ । विस्तारित चक्रपथ दुई चरणमा निर्माण गर्ने योजना डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले बनाएको छ । पहिलो चरणमा ललितपुर र काठमाडौं छुट्याउने मनहरा नदीमा निर्मित बालकुमारी पुलदेखि पशुपति नजिकको तिलगंगापुलसम्मको ४ दशमलव ३ किलोमिटर सडकका लागि ५१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको बाँकी ठाउँ २३ दशमलव ५ किलोमिटरका लागि ४ अर्व रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ८ लेन सडकमा ४ लेन तीव्र गतिमा गाडी गुड्ने सडक बन्नेछ । अन्यमा ३ मिटरको फुटपाथ, ३ मिटरको साइकल लेन, ६ मिटरको सर्भिस ट्रयाक, २ मिटरको सडकको पानी बग्ने नाली, ७ मिटरको बगैंचा, १ मिटरको साइड नाली र ७ मिटरको २/२ लेनको स्पिड हाइवे बनाउने योजना छ । हाई स्पिड १ लेनको चौडाइ ३ दशमलव ५ मिटर हुनेछ । ४ लेनको बीचमा २/२ मिटर फराकिलो फूलबारी बनाउने योजना छ । सडकको पूरा चौडाइ ६२ मिटर हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सडकको दायाँबायाँको २५/२५ मिटर खाली स्थान सदुपयोग गरेर काठमाडौंलाई साँच्चैको सुन्दर नगर बनाउने योजना छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका ललितपुर र भक्तपुर पनि सुन्दर बन्नेछन् । भक्तपुर जोड्ने तीनकुने सूर्य्विनायक ६ लेन सडकमा १५ वटा आकाशेपुल बन्ने भएका छन् । नमुनाका लागि गठ्ठाघर चोक, जडिबुटी, लोकन्थली, कौशलटार र गठ्ठाघरमा पुल बनिसकेको छ । पूरै सडक संरचना तयार भएपछि उपत्यका नै सुन्दर देखिनेछ । आयोजनाका अनुसार कोटेश्वर, गठ्ठाघर, टिबी अस्पताल, ठिमी, एसएस कलेज, राधेराधे, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, सुवर्णचोक, चुनदेवी र सूर्य्विनायकमा पुल बन्न लागेका छन् । नयाँ बन्ने १५ वटा पुलमा व्यापारिक सटर बन्ने छैनन् । ट्राफिक र सडक कार्यालयको आवश्यक सामान राख्न दुईवटा साना कोठा बन्नेछन् । नयाँ बन्ने सबै पुलमा सिसिटिभी जडान गरिनेछ । जाइकासँग सहकार्य गरेर सडकको गतिविधि अवलोकन गर्न क्यामेरा जडान गरी सूर्य्विनायक र कोटेश्वरमा कन्ट्रोल रुम राखेर सडकको गतिविधि नियाल्ने योजना छ ।
काठमाडौंलाई दीर्घकालीन रूपमा आकर्षक सहर बनाउन काठमाडौं मेट्रोको योजना अघि ल्याइएको छ । सरकारले त्यसको प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको छ। योजनाअनुसार रिङ रोडभित्र ४ र रिङरोडको चक्कर लगाउने १ गरी पाँचवटा लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । रेल्वे सञ्जालले काठमाडौंका सबै मुख्य स्थानलाई जोड्ने छ । ६६ दशमलव १ किलोमिटर लामो रेलसंञ्जालको मुख्य टर्मिनल रत्नपार्कलाई बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कुल ३१ स्टेसन रहने काठमाडौं मेट्रो रेल्वेमा रिङरोडका ९ ठाउँ र रिङरोडभित्र सहिदगेट, जमल र नारायणहिटी गरी कुल १२ ठाउँमा रेल्वे लाइन परिवर्तन गर्न ट्रान्सफर स्टेसन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य २१ ठाउँमा यात्रु चढ्ने र ओर्लने स्टेसन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२. प्रस्तावित माइतीघर तिनकुने सडक तथा यसको हरियाली
सबैभन्दा ठुलो चौडाइ तथा ३.३ किलोमिटर लामो माइतीघर–तीनकुने सडक राजधानीको साँच्चिकै नमुना मार्ग बन्नेछ । यसमा चार तहको बृक्षारोपण हुनेछ । सडकको दुबै किनारमा साइलक र पैदल यात्री लेन हुनेछ भने त्यस भन्दाभित्र एक तह हरियाली र बृक्षारोपण गर्ने गरि डिजाइन बनाइएको छ । त्यसपछि दुबैतिर तीन÷तीन लेन सडक कटेपछि फेरि एक तह बृक्षारोपण नै गरिनेछ । त्यसपछि केन्द्रमा दुई तह ननस्पट सडक हुनेछ । सडकको दुबैतर्फ सोलार प्रकाशको व्यवस्था हुनेछ । सडक छेउछाउ मनखुसी होर्डिङबोर्ड राख्न पाइने छैन । होर्डिङ बोर्ड राख्ने ठाउँ डिजाइनकै क्रममा तय भएको छ ।
स्रोत : http://www.nepaljapan.com
३. बनाउन प्रस्ताव गरिएको कमलपोखरी तथा काठमार्डौेंको भित्री सडक
कमलपोखरीलाई सफा गरि वरिपरि पार्क बनाउने, केटाकेटीको खेल्ने ठाउँ बनाइदिने, भित्र वस्ने र हिड्नका लागि छुट्टै ठाउँ बनाउने, कम्पाउन्ड बनाएर जहाँसुकैबाट पस्न नदिने लगायतका व्यवस्था गर्ने वित्तिकै शहरि जनसंख्याको विश्रामस्थल बन्नेछ । ऐतिहासिक पृष्टभूमी वोकेका कमलपोखरीलाई बचाउनेसँगै सार्वजनिक विश्राम र सुस्ताउने थलोको रुपमा विकास हुने गरि नयाँ डिजाइन तयार गरिएको छ । कमलपोखरीको व्यवस्थापनले राजधानीका अरु सार्वजनिक क्षेत्रको उपयोगमा पनि प्रोत्साहन मिल्ने उनी बताउँछन् । पोखरी छेउको नाट्य सम्राट वालकृष्ण समको सालिक समेत पार्कभित्रै समेटेर अर्को आकर्षण थपिनेछ ।
शहर भित्र सबै नदीरखोला किनारमा छुट्टै ढल बनाएर सफा पानी वग्ने व्यवस्था हुनेछ । भित्री सजावटसँगै काठमाडौंलाई वरिपरिबाट घेरेको चक्रपथको बिस्तार र स्तरोन्नती समेत हुनेछ । माइतीघर–तिनकुने सडकमा जस्तै सौन्दर्य र सजावट गरे पछि काठमाडौंको भित्री र बाहिरि दुबै भूभाग रहरलाग्दो हुनेछ।
स्रोत : http://www.bizmandu.com
४. भविष्यमा काठमाडौंको कलंकी चौक
कोटेश्वर–कलंकी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि कलंकी–कोटेश्वर सडकको स्वरूप नै फेरिने छ । आठ लेनको सडक र दायाँ–बायाँ सोलारबत्ती जडान हुनेछ, नयाँ पुल बन्नेछन, यसले सडकको स्वरूप बदलिनेछ । सडकको कुल चौडाइ ३८.५ मिटरको छ । यसैलाई ८ लेनमा विभाजन गरिएको छ । नक्सामा उल्लेख भएअनुसार सडकको मुख्य भाग भने १५.५ मिटरको र ४ लेनको रहनेछ । मुख्य भागमा प्रतिघन्टा ५० किलोमिटरका दरले सवारी हाँक्न सकिनेछ । मुख्य भागको दायाँ–बायाँ १.५ मिटरमा सडक बगैँचा रहनेछ । सडक बगैँचापछि ७/७ मिटर चौडाइमा अर्को २/२ लेनको सडक रहनेछ । यसमा भने प्रतिघन्टा २० किमिका दरले सवारीसाधन हाँक्नुपर्ने हुन्छ । ८ लेनको सडकको दायाँ–बायाँ भने २.५/२.५ मिटरको फुटपाथ छ ।
स्रोत : http://nepalkanoon.com
तीव्र गतिमा सवारी चलाउन मिल्ने गरी ४ लेनको सडक निर्माण गरिनेछ । ७/७ मिटर चौडाइका २/२ लेनको सर्भिस ट्याक्क र सडकको दुवैतर्फ साइकल लेन, अनि दायाँ बायाँ मनग्ये हरियाली हुनेछ । पहिलो चरणमा कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने ८ लेनको चक्रपथको तस्वीर हो । काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाले कलंकी कोटेश्वर चक्रपथको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । सडकको डिजाइन अनुसार बल्खुबाट स्वयम्भू जाने सवारी साधनले कलंकी चोकमा भूमिगत मार्ग प्रयोग गर्न सक्नेछन् जसको लम्बाई ८४० मिटर हुनेछ । भूमिगत सडक निर्माण गर्न करिव १ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भूमिगत सडक माथिको ८ लेन सडक थानकोट कलंकी हुँदै कालीमाटी जाने सवारी साधनका लागि हो । चक्रपथका सहायक लेनबाट आएका सवारीले पनि कालिमाटी तथा थानकोटतिर जान यही ८ लेन सडक प्रयोग गर्नेछन् । भूमीगत मार्ग बनाएपछि कलंकीको आकाशेपुल भत्काइने छ भने एकान्तकुना, सातदोबाटो र ग्वार्कोमा नयाँ आकाशेपुल निर्माण गरिने छ । यससँगै चक्रपथको कोटेश्वर चावहिल कलंकी खण्ड पनि निर्माण अगाडी बढ्ने भएको छ ।
५. सरकारले काठमाडौंको ट्राफिक जाम कम गर्न फ्लाई ओभर बनाउने
सरकारले सडक चौडा पारेर मात्र काठमाडौंमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न कम गर्न फ्लाई ओभर बनाउने नयाँ योजना नेपालकै लागि नयाँ हुनेछ । चीनले काठमाडौंका मुख्य चौकमा फ्लाईओभर बनाइदिने भएको छ । पहिलो चरणमा नारायणगोपाल चोक, चाबहिल र कलंकीमा फलाइओभर (आकाशे सडक) बनाउन चीन सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको हो । चीनले बनाइदिने फ्लाइओभरले मात्र समस्या समाधान नहुने देखेपछि सरकार आफैंले थप नौ स्थानमा फ्लाइओभरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाँँच स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले बनाउने फ्लाइओभर चाहिँ बालाजु, गोंगबु, लैनचौर, केशरमहल, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, नयाँ बानेश्वर आदि स्थानका छन् । कलंकीदेखि एयरपोर्टसम्म आउजाउ सहज तुल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको तीनवटा फ्लाइओभरमध्ये एउटा थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म, अर्को कालिमाटीमा र तेस्रो सहिदगेटदेखि त्रिपुरेश्वरको आँखा अस्पतालसम्म राखिनेछ । सबै फ्लाइओभरको काम अघि बढाउन ‘स्माइल टेस्ट प्रालि’ एवं ‘अभियान कन्सल्टिङ कम्पनी’ लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । माइतीघर तीनकुने खण्डमा पर्ने फ्लाइओभरको डिजाइन तयार भैसकेको छ । ‘नयाँ बानेश्वर चोकैमा ४० मिटरको पुलसहित दुवैतर्फ १७० मिटर भिरालो संरचनाको नमुना डिजाइन तयार पारिसकेको छ । ती फ्लाइओभर दुई टुक्रामा विभाजित गरेर एउटा थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म र अर्को कालिमाटी चोकमा निर्माण गरिनेछ । अब त्रिपुरेश्वरबाटै थापाथली पुग्ने फलाइओभर दुई लेन चौडा बन्नेछ । माइतीघरतर्फ जानेले फ्लाइओभर प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने कुपन्डोलतर्फ जानेले हालकै तलको बाटो प्रयोग गर्ने हिसाबले यसको डिजाइन गरिएको छ । मैतीदेवीदेखि पुरानो बानेश्वर हुँदै सिनामंगलसम्म निस्कने अर्को भूमिगत मार्ग बनाइनेछ । योजनाअनुसार नयाँ बानेश्वरमा सडकको तल्लो भागमा प्यासेज बनाएर सडकको चारै कुनामा एक्जिट प्वाइन्ट राखिनेछ । त्यसबाहेक सडक विभागले मैतीदेवीदेखि पुरानो बानेश्वरमा हाल भएको सडक मुन्तिर सुरुङ मार्ग्निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
नयाँ योजना अनुसार सरकारले तीनकुनेदेखि सोल्टीमोडसम्म ‘फ्लाई ओभर’ बनाउने भएको छ । तीनकुनेदेखि माइतीघर र माइतीघरदेखि सोल्टीमोडसम्म फ्लाई ओभर बनाउने गरी गृहकार्य समेत सुरु भइसकेको छ । सरकारी योजना अनुसार तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्म ३ र माइतीघरदेखि सोल्टीमोडसम्म साढे ३ किलोमिटर फ्लाई ओभर बनाइनेछ । तीनकुने–माइतीघर ४ र माइतीघर–सोल्टीमोड २ लेनको फ्लाई ओभर हुनेछ । यसका लागि सुरुमा नयाँ बानेश्वर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर र कालीमाटीमा ‘इन्टर सेक्सन ओभर ब्रिज’ निर्माण गरिनेछ । त्यसपछि इन्टर सेक्सन ओभर ब्रिजलाई नै जोडेर फ्लाई ओभर निर्माण गरिने छ । नयाँ बानेश्वरमा ब्रिज बनाउने योजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । नयाँ बानेश्वर चोकमा फ्लाई ओभर बनाउनका लागि ‘स्वाइल टेस्ट’ माटो परीक्षण भइरहेको छ । माटो परीक्षण भइसकेपछि इन्टर सेक्सन ओभर ब्रिजको नक्सा तयार पारी टेन्डर आह्वान गरिनेछ । राजधानीका सडकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम नयाँबानेश्वर चोकमा हुने गरेकाले सबैभन्दा पहिला सो ठाउँमा ‘इन्टर सेक्सन ओभर ब्रिज’ बनाउन लागिएको हो । ४ ओटै स्थानको इन्टर सेक्सन ओभर ब्रिज तयार भएपछि त्यसमाथि फ्लाई ओभर निर्माण गरिने योजना छ । ती फ्लाई ओभर जमिनभन्दा करिब ५ मिटरको उचाइमा रहनेछ । सरकारले ६ किलोमिटर फ्लाई ओभर निर्माणका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानसमेत गरेको छ । फ्लाई ओभर निर्माणपछि त्यहाँ नरोकिने सवारी साधनलाई मात्र गुडाउन अनुमति दिइनेछ । बढ्दो सहरीकरणसँगै राजधानीमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेपछि विभागले जाम कम गर्ने उद्देश्यसहित ‘फ्लाई ओभर’को अवधारणा ल्याइएको हो ।
स्रोत : http://nagariknews.com
Posted in General. Tagged with Gopal Bhandari, कमलपोखरी तथा काठमार्डौेंको भित्री सडक, काठमार्डौें, काठमार्डौेंको मुहार, गोपाल भण्डारी, फेरिदै गएको काठमार्डौें, फेरिदै गएको काठमार्डौेंको मुहार, फ्लाई ओभर, भविष्यमा कल्पना गरिएको काठमाडौं, भविष्यमा काठमाडौंको कलंकी चौक, माइतीघर तिनकुने सडक.
भावी नेपालको बिकासका योजनाहरु/अबधारणाहरु →